qBittorrent: Codsi aad u fiican oo fudud oo lagu maareeyo daadka | Laga soo bilaabo Linux
Linux Post Ku Rakib | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maareeyaha faylka QBittorrent torrent
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira adeegyo badan oo web ah oo noo oggolaanaya inaan si bilaash ah ula wadaagno faylasha adigoon u dhigin daruurta, hase yeeshe habka caadiga ah ee fudud ee lagula wadaagi karo faylal kasta oo weyn saaxiibbadeen waa in lagu sameeyo iyada oo laga faa'iideysanayo shabakadda faylka durdurka leh.
Iyo inkasta oo ku dhowaad qof walbaa ogyahay sida looga helo feylasha durdurka internetka si looga soo dejiyo waxyaabaha noocyadooda kala duwan leh, inta badan isticmaaleyaashu weligood iskuma dayin inay abuuraan toggooda ama kombiyuutarkooda u rogaan Server Torrent. Sidaa darteed, Maanta waxaan ka hadli doonnaa qBittorrent, oo maanta ka mid ah macaamiisha ugu caansan ee maareynta durdurinta ee 'GNU / Linux'.
Waqtigan xaadirka ah waxaan awoodi karnaa inaan abuurno feyl durdur ah oo aan la wadaagno faylalkayaga (fiidiyowyada, dukumiintiyada ama sawirrada) asxaabtayada ama xitaa bulshada inteeda kale ee isticmaaleyaasha ah, adoo adeegsanaya qBittorrent. Laakiin waa maxay qBittorrent?
1 Waa maxay qBittorrent?
2 Ma sharci baa in la isticmaalo qBittorrent?
3 Sidee loo isticmaalaa qBittorrent?
4 Tilmaamaha Hadda
5 Sidee loo abuuraa feylal durdur ah oo lala wadaago?
5.1 Talaabada 1: Ku orod ikhtiyaarka "Abuur torrent" (Ctrl + N)
5.2 Talaabada 2: Buuxi foomka Abuurista Daadadka
6 Talo soo jeedin
Waa maxay qBittorrent?
qBittorrent waa software bilaash ah oo furan oo loogu talagalay GNU / Linux Operating Systems oo naga caawinaysa inaan faylasha ku dhaafno dadka kale ee adduunka ku baahsan borotokoolka P2P Bittorrent. Codsigan ayaa xilligan beddel fiican u ah barnaamijyada la midka ah ee Windows, Mac OS iyo Linux, maadaama ay tahay barxad-marin.
Hawlaha ugu xiisaha badan waxaa ka mid ah mashiinkeeda raadinta, kaas oo noo oggolaan doona inaan helno feylasha ay dadka kale wadaagaan ee shabakadda si dhakhso leh oo fudud. Intaa waxaa dheer, qBittorrent waxaa ku jira kordhintii ugu dambeysay ee Bittorrent iyo kobcinta, taas oo u oggolaaneysa inay si habsami leh oo aad u sarreysa u qabato, marka loo eego kuwa kale.
Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa qBittorrent inuu yahay Software Bilaash ah laguna daabaco liisanka GNU GPLv2, sKoodhkaagu wuu furan yahay waana la wada heli karaa waana la heli karaa si dib loogu isticmaali karo shuruudaha shatiga la sheegay. Tani waxay samaysaa qBittorrent, waa aalad la jeclaan karo oo aan ku jirin wax furin ah, spyware, xayeysiin ama barnaamijyo dhinac saddexaad oo aan loo baahneyn, sida barnaamijyo la mid ah oo ku saabsan Nidaamyada Howlgalka Gaarka loo leeyahay.
In kastoo waa inaan xadidno taas In kasta oo lagu sii daayo liisanka GNU GPLv2, waxay la timid marka lagu daro waxyaabaha soo socda ee gaarka ah ee soo socda:
Sidoo kale, marka laga reebo gaar ahaan, dadka haysta xuquuqda daabacaadda waxay fasax u siinayaan inay ku xiraan barnaamijkan maktabadda "OpenSSL" ee mashruuca OpenSSL (ama noocyo wax laga beddelay iyadoo la adeegsanayo laysin la mid ah maktabadda "OpenSSL") oo loo qaybiyo kuwa fulinaya ee ku xiran. Waa inaad adeecdaa Ruqsadda Guud ee GNU ee dhammaan ixtiraamka dhammaan koodhka la isticmaalo marka laga reebo "OpenSSL". Haddii aad wax ka beddesho feylasha, waad ku dheereyn kartaa ka-reebitaankan nooca faylka (faylasha), laakiin adiga lagagama baahna inaad sidaas sameyso. Haddii aadan rabin, ka saar cadeyntaan ka reebitaanka noocaaga ah.
Ma sharci baa in la isticmaalo qBittorrent?
In kasta oo qBittorrent uu yahay barnaamij wadaag wadaag feyl-faca ah (P2P), iyo waa sharci sharci in la isticmaalo, laakiin waxay noqon kartaa sharci darro in lagu soo dejiyo waxyaabaha xaddidan barnaamijkan, iyadoo ku xiran sharciyada waddan kasta.
Sidee loo isticmaalaa qBittorrent?
qBittorrent aad ayey u fududahay in la isticmaalo, haddii aad hore u isticmaashay barnaamijyo kale oo la mid ah, laakiin ka faa'iidaysi ahaan wuxuu leeyahay interface fudud oo wuxuu ku yimaadaa Isbaanish. Leh a bogga rasmiga ah wax ku ool ah oo ay ka buuxaan qaybo waxtar leh si dhakhso leh naloo baro sida loo isticmaalo.
Haddii aad rabto inaad wax yar ka sii akhrido astaamaha qBittorrent iyo barnaamijyo la mid ah booqo tan post blog hore mawduuca Hadana haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan, booqo iyaga goobta rasmiga ah ee Github.
Isku xirka isticmaalaha oo la mid ah μTorrent
Mashiinka raadinta ee si fiican isku dhafan oo loo kordhin karo
Raadin isku mar ah goobo badan oo raadinta durdur ah
Noocyada codsiyada gaarka ah ee raadinta sida: buugaag, muusig, softiweer
Taageerada RSS Feed ee miirayaasha soo dejinta ee horumarsan
Xakamaynta fogaanta iyada oo loo marayo adeegsadaha isticmaalaha websaydhka, oo lagu qoray AJAX, iyo ku dhowaad isku mid ah is-dhexgalka caadiga ah
Soo dejisan taxane ah (Soo qaado si isku mid ah)
Xakamaynta horumarsan ee daadka, trackers, iyo asxaabta
Shaandhaynta IP (waxay taageertaa qaabka eMule iyo PeerGuardian)
Taageerada gudbinta dekedda UPnP / NAT-PMP
Waxaa laga heli karaa dhammaan barnaamijyada: Windows, Linux, MacOS, FreeBSD, OS / 2
Waxaa lagu heli karaa in ka badan 70 luqadood
Taageerid fidinno badan oo jira oo Bittorrent ah, sida:
Miiska xashiishka loo qaybiyo (DHT),
Nidaamka Isdhaafsiga Isdhaafsiga (PEX),
Sahaminta Jiilalka Maxalliga ah (LSD)
Xidhiidhada sirta ah
Sidee loo abuuraa feylal durdur ah oo lala wadaago?
Talaabada 1: Ku orod ikhtiyaarka "Abuur torrent" (Ctrl + N)
Talaabada 2: Buuxi foomka Abuurista Daadadka
Daaqadda hore ee hoose laga arkay:
Buuxi xulashooyinka soo socda:
Wadada: Xullo feyl ama galka si aad ugu tilmaamto togga.
Dejinta: Liistada hubinta "Gaarka ah" waa mid ikhtiyaari u ah isticmaaleyaasha horumarsan waxaana lagu talinayaa "Abuurista degdegga ah".
Goobaha: Kudar “URL-yada Tracker-ka” ee la isku halleyn karo sida ugu macquulsan una buuxi meelaha kale (ikhtiyaar). Booqo xiriirka soo socda si aad u hesho "URL-yada Tracker" cusbooneysiiyay.
Sida lagu arkay sawirrada soo socda:
Hadda waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dirto faylkaaga la abuuray oo aad ansaxiso xiriirka iyo soo dejinta faylka qofka kale. Xusuusnow in marar badan ay ku qaadato in muddo ah durdurka inuu ku faafo iyada oo loo marayo serverka trackers si loo soo dejiyo. Xusuusnowna in guusha hawsha durdurku ay ku jirto "URL-yada Tracker" ee loo isticmaalo abuuristiisa.
qBittorrent waa macmiil aad u firfircoon oo horumarsan durdur, sidaa darteed waxay leedahay shaqooyin ku filan oo loo baahan yahay oo si fudud loogu maareeyo soo dejinta. Isku xirnaanta iyo shaqeynta waxay diirada saareysaa soo dejinta durdurka aan codsano iyada oo aan dhibaatooyin badan laga gaarin Ugu dambeyntiina, waa barnaamij bilaash ah oo sidaas darteed kuma jiraan xayeysiis ama pop-up xayeysiis ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » qBittorrent: Codsi aad u fiican oo fudud oo lagu maareeyo daadka
Cashar barasho wanaagsan!
Way fiicnaan lahayd in lagu daro fikradaha sida Trackers, Peers qaab cad oo la fahmi karo.
Intaas waxaa sii dheer, fadlan, cashar ku saabsan sida loo abuuro server durdur aamin ah iyo sida gaarka ah ee ugu macquulsan.
Ujawaab Victor R.
Boostada waxaan kuugu soo diray wax dheeraad ah oo ku saabsan. Nasiib iyo Guul!
maryan teliz dijo
Macluumaad aad u fiican
Ku jawaab marian teliz
hello, asxaabta websaydhka, markay arkeen faallooyinkaaga. Waxaan jeclaan lahaa inaan muujiyo shakigeyga sababtoo ah maalmo ka hor waxaan doonayay inaan soo dejiyo codsi wanaagsan oo aan ku heli karo tayo ka fiican fiidiyowyada, ciyaaraha iyo wax kale, waxay ii sheegeen wax ku saabsan BitTorrent, laakiin ikhtiyaarka ugu fiican ee hadda jira waa uTorrent waxayna ii soo direen boggan la yiraahdo download rasmi utorrent , halkaas ayaan ka heli karaa wax kasta oo aan raadinayo, laakiin haddii aan runta u sheego, wax fikrad ah kama haysto sida boggan uu yahay iyo haddii uu yahay mid gebi ahaanba la isku halleyn karo, waxaan jeclaan lahaa inaad i siiso fikradahaaga ku saabsan mawduuca la soo bandhigay
Ku jawaab yeididi12
PDFtk: Qalab lagu kala qaybiyo faylasha PDF-ka ee laga helo terminalka
Natron - Codsi ka-dib-u-eg codsi dijitaal ah